Bangiga Cusub Ee Tawakal Bank – Codka Qaranka Tanadland
Marka hada ah, magaalooyinka (Darasalaam) (Nairobi) iyo (Jabuuti) waxaa ka socda dhismaha daaro cusub oo ay leedahay shirkadda (Tawakal Group). Dhismeyaashaas oo noqondoona xarumaha bangiga cusub ee (Tawakal Bank). Shirkadda (Tawakal Group) in mudaa waxay ka koobnayd labo qaybood qaybta xawaaladda (Tawakal Express) oo faraca hooyada u ah shirkaddaha tawakal. Faraca labaadna waa shirkadda (Tawakal Towers Real Estate) oo ah faraca labaad. Tawakal Towers Company address: Al Nasser Square, Dubai, Phone +971-4-2238668, Fax + 971-4-2238669.
Halkaan Ka daawo xayeesiinta guryihii ugu horeeyey ee ay dhistay shirkadda (Tawakal Towers Real Estate).
Shirkadda (Tawakal Towers Real Estate) waa shirkad aad u faa’iido badan. Labo sano ka hor daqliga shirkadda (Tawakal Group) u soo xerooda 75% ilaa 80% wuxuu ka imanjirey shirkadda (Tawakal Towers Real Estate). Faraca dhismaha ee shirkada ee (Tawakal Group) waa shirkadda labaad ee ugu weyn shirkaddaha dhismaha ee soomaalida. Shirkadda qura ee dhismaha oo ka weynina waa shirkadda faracyada badan ee (Somgulf Group). 1) (Somgulf Real Estate), 2) (Somgulf Property Development), 3) (Somgulf General Trading), 4) (Somgulf Contracting Company), 5) (Somgulf Real State Brokers),
Address: Office # 704, 7th Floor,
Al Khas Building, Al Nasser Square,
Zip Code: 251601, Deira,
Dubai. Dubai-Box No. – 21694
Phone: +971 4 -2220104 Fax: 2220196
Mudo haatan lagajoogo labo sanaddood maamulka sare ee shirkadda (Tawakal Group) waxay sheegeen inay wadanka soomaaliya ka furanayaan bangiyo. Shirkaddu markaas waxay bilowday habka ganacsiga ee (E-tawakal), Habkaas oo macaamiisha u suuragelinaya inay lacagta u taala bangiga tawakal ay si sa sahlan u isticmaalaan. islamarkaas bangiga (Tawakal Bank) wuxuu heshiis la galay sadexda shirkaddood ee ugu waaweyn shirkaddaha isgaarsiinta ee soomaaliya, sida (Hormuud Telecom), (Telesom) iyo (Golis Telecom). Ganacsatada soomaaliyeed ee daafaha dunida kala jooga wuxuu habka (E-Tawakal) u suurogeliyey inay maaliyeddood si fudud ay ugu beecmushtaraan. Habka (E-Tawakal) na wuxuu mudo gaaban noqday kaydka amaanada ee ugu balaaran oo ay soomaalidu maaliyeddooda dhigtaan. Hady ahaanlahayd ganacsato amase xoogsatada soomaaliyeed.
Shirkaddaha isgaarsiinta ee soomaaliya horumar lixaad leh ayey ku talaabsadeen waxaana la oran karaa waxay hormuud u yihiin shirkaddah dalka ka jira oo dhan. Shirkaddaha (Nationlink Telecom), (Golis Telecom), (Hormuud Telecom) iyo (Telesom) kaalin muhiim ah ayey ka soo qaateen horumarinta beecmushteriga soomaaliyeed, welina waxay uga jiraan kaalinta ugu muhiimsan ee ay shirkaddaha soomaalidu ay ka qaataan horumarinta dalka. Shirkaddaha isgaarsiinta soomaaliyeed beecmushteriga isgaarsiinta ee ay umadda soomaaliyeed ka haqabtireen, waxaa u weheliya waxay dabooleen kaalinta banaan ee bangiyada. Waxayna umadda soomaaliyeed ay u noqdeen bangiyo ay hantidooda dhigtaan. Marka ay hantidooda dadku u baahdaana ay si sahlan ugu adeegan karaan iyaga oo ka kaaftoomay adeegsiga lacagta cadaanka ah. Arin taani shacabka iyo beecmushteriga soomaaliyeed waxay u ahayd horumar la gaarey.
Dadaalka iyo waxqabadka shirkadaha isgaarsiinta soomaaliyeed maaha wax caalamka ka qarsoon, Tusaale ahaan ururka (GSMA – Groupe Speciale Mobile Association) waxaa loo aas-aasay inuu ka shaqeeyo danaha shirkaddaha taleefanada gacanta ee caalamka. Waxaa wakiishay oo u ururku wakiil ka yahay 800 oo shirkaddood oo shirkaddaha taleefanada gacanta ah. Shirkaddahaas oo ka kala socda 220 wadan oo kala duwan.
Dhowaan ururka (GSMA) waxay soo saareen warbixin ay ka diyaariyeen dadka aan bangiyada la’hayn ee taleefanada gacanta u isticmaala sidii bangi. Baaritaan kaas cilmiyaysan wuxuu ururka (GSMA) soo saaray bishii ina dhaaftay (01/07/2013). Ururka (GSMA) warbixinta uu soo saaray wuxuu ku sheegay in habka bangiga ee loo yaqaan “Zaad” oo ay isticmaasho shirkadda (Telesom), inuu yahay habka taleefanada gacanta bangi ahaanta loogu isticmaalo ee labaad oo aduunka dadka ugu badan ay isticmaalaan. Ururka (GSMA) baaritaan uu ku sameeyey shirkadda (Telesom) wuxuu ku ogaadey in macaamiisha shirkaddu ay bil walba isku cel-celis 30 jeer lacag isweydaarsi ay sameeyaan. Halkaan Tuuji
Shirkadda kaalinta kowwaad uga jirta dunida u isticmaalka taleefanada gacanta hawlaha bangiyadana waxay warbixintu sheegtay inay tahay shirkadda (Econet Wireless). Shirkadda (Econet Wireless) oo laga leeyahay dalka Zimbabwe ayaa habka loo yaqaan “EcoCash”. Waxaana macaamiisha shirkadda (Econet Wireless) ay bishiiba sameeyaan isku cel-celis 31 jeer lacag isweydaarsi. Laakiin nasiibdaro bangiyada soomaaliya ka jira ilaa iyo hada waa kuwo aan baahida beecmushteriga soomaaliyeed, bal iskadaa in shirkaddaha kale ee caalamka ay la tartamaane. Hada soomaaliya waxaa ka shaqeeya oo laamo bangi ku leh hal bangi oo qura. Bangigaasina waa bangiga (Salaam African Bank) oo ay xaruntiisu tahay magaalada jabuuti ee dalka Jabuuti, lana aas-aasay sanadkii 2008 -ka.
Adeegyada (Tawakal Bank) hada uu bixiyo :-
Adeegyada (Tawakal Bank) marka hada ah uu bixiyo waa afar nooc oo kal ah 1. (Amaano), 2. (Online Money Transfer), 3. (E-Tawakal), 4. (Mobile Money).
1. Adeega (Amaano) wuxuu ka koobanyahay sadexda hanaan ee santuuqyada maaliyadda bangiyada loo isticmaalo sida (Curent Account), (Saving Account), (Cheque Books). Waana hababka ugu caansan ee santuuqyada maaliyadda bangiyada hantida loo dhigto loogalana baxo. Santuuqa maaliyadda ee (Curent Account) waa waa santuuqa sida joogtada loo isticmaalo, oo markii la doonana hantida la dhigto markii la doonana lagala baxo. Santuuqa (Saving Account) isaguna waa santuuqa maaliyadda mudada cayiman la dhigto, haday ahaan lahayd 1 sano, 2 sano ilaa 10 sanadood. Hantidaas oo qofka macbiilka ah hantidiisa loogu haynayo, ama mashaariicda uu (Tawakal Bank) maaligeliyo macbiilku saami ugu yeelankaro si kaydku uu sanad kasta macaash fiican ugu dhalo.
2. Adeega (Online Money Transfer) waa adeeg macaamiisha (Tawakal Bank) santuuqa lacagta ku leh, ay iyaga oo gurigooda ama goobtooda shaqo jooga ay lacag u xawili karaan soomaaliya iyo dunida meel kasta oo u (tawakal Bank) xarun ku leeyahay. Iyada oo ay macaamiishu santuuqooda intay furtaan ay lacag intay rabaan ay dirsan karaan iyaga oo adeegsanahaya khadka internedka. Laakiin nasiibdaro soomaalidu ma’ay laha bangiyo daboolikara baahida beecmushteriga soomaaliyeed, bal iskadaa inay shirkaddaha kale ee dunida ay la tartamaane.
3. Habka (E-Tawakal) waa hanaanka ganacsi ee caalamiga ah oo loo yaqaan “Electronic Commerce”, marka la soo gaabiyona loo yaqaan (E-Comerce). Hanaanka (E-Tawakal) waa hanaanka ugu balaaran ee beecmushteriga soomaaliyeed gude iyo dibedba ay wax ku kala iibsadaan. Ganacsatada soomaaliyeed ee ku xiran wadamada (China) iyo (United Arab Emirates), qaasatan magaalooyinka (Dubai) iyo (Yiwu International Trade City) waxay dalbadaan badeecadaha ay u baahan yihiin, waxayna ay lacagaha hanaanka (E-Tawakal) iyaga oo isticmaalaya santuuqa lacagta ee ay ku leeyihiin (Tawakal Bank). Adeega (E-Tawakal) waxaa la sameeyey sanadkii 2010 -ka.
Fidiyowgaan qaybaha danbe waxaa looga hadlayaa sida akawntiga looga furto (Tawakal Bank) iyo siyaalaha wax loogula kala wareego hanaanka loo yaqaan (E-Tawakal)
4. Adeega (Mobile Money) ee Tawakal bank waa hanaan kale oo u qofka macbiilka ahi lacag-isweydaarsi uu ku samaynkaro, haday ahaanlahayd lacag uu macbiilku bixinayo amase lacag isaga la siinayo. Ha ahaato biil uu bixinayo, wax uu gadanayo amase wax laga iibsanayo. Adeega (Mobile Money) ayaa waxaa la hirgeliyey sanadkii 2011. Shirkadda (Tawakal Group) waxay agaasinka tababarada iyo dhismaha (Tawakal Bank) ay u xilsaaray (Eng. Cali Siciid Maxamed “Nacnac”
Bangiga (Tawakal Bank) Iyo Qorshihiisa Cusub :-
Mudo gaaban oo aan 3 sanaddood dhamayn (Tawakal Bank) waxay noqotay shirkadda ugu balaaran ee ay beecmushteriga iyo xoogsatada soomaaliyeed ay hantidooda dhigtaan, walow uusan (Tawakal Bank) weli yeelan xarumo u gooniya oo u ku shaqeeyo xarumaha xawaaladda (Tawakal Express). Balse sida aan ka war helay waxaa la filayaa in shirkadda (Tawakal Group) ay sanadka 2014 -ka bilowgiisa biliowdo dhismaha xarumaha bangiga.
Shirkadda (Tawakal Group) ayaa ku talojirta inay bangiga tawakal ay ka hirgeliso wadamada (Soomaaliya), (Kenya), (Tanzania), (U.A.E) iyo (Jabuuti).
Wadamada bariga afrika sida (Kenya), (Tanzania) iyo (Uganda) magaalomadaxyada gobalada marka laga reebo, magaalooyinka yar-yar iyo kuwa meeldhexaadka ah ma’ay laha bangi ganacsi. Maadaama magaalooyinka yar-yar faa’iido maalgelin u qalanta aysan qarashka bangiyada uga baxaya soo celinkarin. Hayeeshee, wuxuu (Tawakal Bank) uu ku talo jiraa inuu bangiyo yar-yar oo ganacsiyo kale ku lamaan uu meelahaas ka hirgeliyo.
Siyaalaha ay bangiyada dunida islaamku ay ku shaqaystaan :-
Dabcan (Tawakal Bank) waa bangi islaami ah, bangiyada islaamiga ah ayaa hada waxay ku ganacsadaan 6 hab oo kala duwan. 1. (Sukuk Al Musharaka) – Maalgelin, 2. (Sukuk Al Ijara) – ijaarasho ka mushtar, 3. (Sukuk Murabaha) – Kaydsasho ka mushtar, 4. (Sukuk Al-mudaraba) -maareyn ka mushterid, 5. (Sukuk Al Istisna) – Mashruucfulin ka mushtar Islamic project bond, 6. (Sukuk Al-wakalah) – dulaal ka mushtar “stockbroker”.
Muhiimadda ay leeyihiin adeega (Cash Machine) Iyo (Pos Terminal)
Adeega loo yaqaan (ATM Machine) amase (Cash Machine) waa habka ugu caansan ee bangiyada loogaga qaato marka aad u baahato kaydka bangiga kuu yaal inaad wax kal baxdid. Santuuqyada lacagaha lagal baxaa badanaa waxay ku yaaliin, derbiyada bangiyada iyo ganacsiyada muhiimka ah. Waxaana isticmaasha cid kasta oo bangiga santuuqa leh macbiishiisa ah ama kaar bangi oo bangigaas xiriir la leh haysta.
Adeega loo yaqaan (Post Terminal) waa adeega ugu sahlan uguna muhiimsan ee ay ganacsatada bangiyadu isticmaalaan. Aaladda (Post Terminal) waa aalad bangiyadu ay ganacsatada siiyaan oo qof qaangaar ah calaacashiiisa le’eg, Aaladda (Post Terminal) lacagta ayaa lagu bixiyaa waana lagala baxaa iyada oo kaarka bangiyada la adeegsanayo. Aaladda (Post Terminal) waa aaladda ugu faa’iidada badan ee meheradaha yar-yar iyo kuwa waaweyn ay wax uga gataan macaamiishooda. Adeega (Post Terminal) mar kasta oo lagu sameeyo lacag-isweydaarsi, bangiga aaladda (Post Terminal) -ka leh wuxuu qofka meheradlaha ah bishiiba mar ka goostaa qidmo yar oo cayiman. Qofka macbiilka ahna aaladda (Post Terminal) ku waxay u sahashaa inuu wax iibsado ama uu lacag kala baxo marka uusan lacag haysan.
Marka aad ganacsade weyn tahay waxaad bangigaaga ku yeelanaysaa dulaal qaas kuu ah oo kuu qaabisan iibinta iyo gadashada. Magaalo aan bangi la’haanjirin marka ay bangi yeelato, dadka magaaladaas degan waxaa u baaqda qarashka uga bixijirey meesha fog marka ay bangi u aadaan. Hayeeshee, arinta ugu muhiimsan ee bangigu fududeeyaa waa hawlaha beecmushteriga. Meesha uu bangigu ka jirona ganacsatada waxaa u suuragasha iyaga oo goobtooda ganacsi jooga inay wax-isweydaarsi sameeyaan, oo wax laga iibsado ama ay iyagu wax iibsadaa. Marka (Tawakal bank) uu dalalka bariga afrika ka hirgalo wuxuu dabooli doonaa adeegyo baahi weyn loo qabo.
Arinta kale ee muhiimka ahi waxay tahay in xawaaladihii soomaalida ay caqabad weyni soo foodsaartay, ayna dhibaato weyni ka haysato helitaanka bangi ay lacagaha ku dirsadaan oo ay ku kalsoonaan karaan. Ayaan markaad joogtaba waxa aad maqlaysaa bangi hebel ayaa xawaaladaha soomaalida xiriirka u jaray. Sababtuna waxa weeye bangiyada reer galbeedku waxay aaminsanyihiin, in hadii xawaaladaha soomaalida ay xayiraad saaraan ay markaas macaamiisha soomaalidu ay bangiyadooda lacagta ka dirsan doonaan.
Arinta kale oo muhiimka ah ayaa waxay tahay in marka dowladda soomaaliya ay hanaqaado uu bangiga aduunka iyo IMF-tu ay cadaadis ku saaridoonaan, inay dowladdu bangiyada iyo xawaaladaha ay sharuuc u sameeyaan. Markaasna waxaa dhacaysa in bangiga dhexe ee soomaaliya uu xadido miisaaniyadda looga baahanyahay bangiyada shatiga banginimo la siinayo. Taasoo suuragalinaysa in bangiyo waaweyn oo tayo leh inay soomaaliya ka abuurmaan. Taas oo dadka badankoodu ay uga fursan karaan hanaanka ganacsiga ee xawaaladaha.
Marka soomaalidu hadii ay hesho bangi caalami ah oo ay soomaaliyi leedahay. Waxay xawaaladaha soomaalidu ay ka fursan la haayeen kurbada iyo xayiraada ay ku hayaan bangiyada reer galbeedku.
Ruuxii Doonaya In Uu Lacag Ka Dirsado (Tawakal Bank), Qofkii U Baahan In Santuuqakha Lacagta Uu Ka Furto Bangiga Amase Doonaya Xisaabaadka Santuukhiisa Wixii Ka Baxay Iyo Wixii Ku Soo Dhacay Inuu Fiirsho, Sawirka Kor Ka Muuqda ee E- Tawakal Dushiisa Ha Tuujiyo.
Halkani Waa Codka Wadaniga Xalaasha Ah Ee Umada Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland, By: Saxardiid Xareed Bulxan